Gear Reducer, Reducer Cycloidal Speed, gear Worm, DC Motor - Devo Gear
Sax reducer marsho Planetary
Reducer Cycloidal Speed
Worm Nmrv Gear Reducer
Nmrv reducer marsho dixiri, waxa yar ee mugga, miisaanka iftiin, sare ee oolnimada radiating, waaweyn ee Xuddunta saarka, siman ee orodka iyo sanqadh yar yahay. Waa suitbale jagooyinka oo dhan.
R taxane reducer marsho helical waa fikrad design horumarsan soo bandhigay dibadda uga sannadihii la soo dhaafay. Waxaa la horumariyo oo soo saaray qaab macquul ah, miday xoog, isku halaynta sare, soo sara kaco heerkulka yar yahay, awoodda dhalista waaweyn iyo qaab isku dhafan fiican isku dhafan oo xaqiiqada Ujeedada of our dalka. Waxaa lagu dari karaa taxane F, taxane K, S taxane, iwm si aad u hesho xawaaraha hoose iyo Xuddunta weyn.
OUR ALAABADA LATEST
Devo R Taxanaha Rx 37 ~ 157 ilig adag singl garabka ...
R Taxanaha Devo cagta Jaha reducer marsho helical
WPA marsho reducer sanduuqa marsho siman toosan w ...
WPA reducertransmission xawaaraha marsho reducer Xori ...
WPA WPS xawaaraha dixirigoodu WPA reducer gear reductor ...
(J) ZQ 650 gear dusha qalabka jilicsan waayo constru ...
tayo sare leh taxane Rx reductor marsho helical
zq tayo sare leh 500 zq reducer marsho 350 gearbo ...
(J) ZQ 250-1000 Taxanaha qalabka jilicsan gear dusha ...
(J) ZQ 850 gear dusha qalabka jilicsan waayo constru ...
xagasha midig reducer Planetary Healt gear tallaabo ...
2019 iibka caalamka kulul reducer xawaaraha Xuddunta sare ...
Jiangsu Devo Gear Technology Co., Ltd. oo la asaasay 2018. Waxaa la aasaasay by koox ka mid ah dadka dhallinyarada ah ruuxa ganacsiga. Waxaa la go'aamiyey in la sameeyo sanduuq marsho wanaagsan ee 100 sano. Shirkadda waa 50-100 dadka, iyadoo R xirfadeed & amp; D, design, kooxda iibka, wax soo saarka si fiican u iibiyo gudaha iyo dibaddaba, suuqa waa macaamiisha overseas.Provide inta badan xoog leh shakhsi solutions.On ku salaysan soo celinta, iyo labada dhinac
Hel updates ugu dambeeyey oo dalab ...
No. 403, Dhisidda 2, Waxyaabaha Market, No. 170, Xiadian Road, Xuzhou, Jiangsu, Shiinaha (Dhul)
Nmrv130 , Nmrv63 , Nmrv Reducer , gear Nmrv , Nmrv050 , Nmrv gear Worm ,